RaspEX: Qaybinta Raspberry Pi 3 oo la jaanqaadaysa dib u dhaca | Laga soo bilaabo Linux
Kuwa isticmaala ama raba inay isticmaalaan Raspberries, waxaan u soo bandhigeynaa RaspEX, nidaamka loogu talagalay kumbuyuutarkan yar, iyo sidoo kale noo keena munaasabaddan, wararka nidaamka dib loo rogay oo si gaar ah loogu dhisay Pi 3 oo leh cusbooneysiin kala duwan; daboolaya taageerada Bluetooth, beddelka firida hore, ilaa rakibidda Xarunta Warbaahinta ee Kodi (XBMC); codsi il furan, oo loogu talagalay dib u soo celinta warbaahinta bilaashka ah. Sida xulasho jawi garaaf ah, waxay soo bandhigaysaa Lxde.
Haddii aan ka hadalno iswaafajinta, nidaamyada la fulin karo ee loo yaqaan 'Raspberry Pi 2' lama isticmaali karo, inta badan, nooca Pi 3, sababtoo ah processor-kiisa 64-bit ah. Taas oo ku qasbi doonta adeegsadaha inuu cusbooneysiiyo nidaamka kernel cusub. Laakiin waxa cajiibka ah ayaa ah in nidaamka cusub, sidaan horay u sheegnay, uu ahaan doono si buuxda ula jaan qaada Raspberry Pi 3, marka lagu daro sii wadida iswaafajinta gadaal ee nooca Pi 2.
Si gaar ah, RaspEX Dhis 160402, waa nidaam Linux ARM ah, oo ka hoos shaqeeya noocyada Raspberry Pi 1, Pi 2 iyo Pi 3. Waxay leedahay Kernel 4.1.20-v7 waana ku saleysan Debian Jessie, nooca 8.3, Ubuntu Wily Werewolf, Ubuntu daabacaaddii 15.10, iyo Linaro, barnaamij furan oo loogu talagalay ARM SoC. Nooca cusub wuxuu cusbooneysiiyay xirmooyinka Google Chrome iyo Firefox, iyadoo la hagaajiyay taageerada YouTube. Intaa waxaa sii dheer waxay leedahay PulseAudio cusbooneysiiyay.
Noocan ah 160402, dhowr qalab oo shabakad ah ayaa la simin oo lagu daray nidaamka, markiisa, sidoo kale waa la rakibay vnc4server y Samba, si ay u jiraan xiriir la leh Windows PC-gaaga shabakad guri, marka lagu daro maamulka suurtagalka ah ee RaspEX ee noocyada Pi 1, Pi 2 iyo Pi 3 Raspberry leh VNC Daawade o Putty (Telnet iyo macmiilka SSH). Waxqabadka wanaagsan ee RaspEX ayaa sii wadaya inuu jiro, maadaama tani ay tahay nidaam aad u dhakhso badan oo leh jawi desktop ah oo loogu talagalay in lagu keydiyo tamarta. Ma yahay Firefox sida web browserka asalka ah iyo Cilmi-baarista maamule xirmo, awood u leh inuu tan isticmaalo, si markaa xirmo kasta oo dheeri ah oo loo baahdo loo rakibo iyadoo lagu mahadinayo keydka Software-ka Ubuntu.
Haddii aad rabto waxqabadka nidaamka wanaagsan waa inaad haysataa kaar SD oo tayo sare leh. SD ugu yaraan 8 GB ayaa lagula talinayaa. Haddii aan ka hadalno bootka, kani waa mid dhakhso badan. Kadib markaan bilowno deegaanka LXDE, waxaan bilaabi karnaa adeegsiga nidaamka. Furaha sirta ah ee nidaamka lagu bilaabayaa waa "raspex". Hadaad gasho sida raspex waad isticmaali kartaa Sudo inaad noqotid xidid. Xaaladda gelitaanka asal ahaan, isticmaal lambarka sirta ah, laakiin dabcan, haddii aad doorbideyso inaad abuurto isticmaale cusub sidoo kale waad sameyn kartaa. Tan darteed waxaad gali kartaa amarka / usr / sbin / adduser MyNewUser.
Haddii ay dhacdo inaadan rabin in lagaa diiwaangeliyo inaad tahay 'raspex' waa inaad wax ka beddeshaa feylka soo socda /etc/slim.conf.
Haddii aad rabto inaad xoogga saarto nidaamkaaga Kodi, waxaa lagugula talinayaa inaad maamusho amarka soo socda si loo hagaajiyo waxqabadka:
Haddii aad rabto inaad tan sameyso, waa inaad marka hore u maamushaa seddexdaan amar asal ahaan, si aad ugu eg nidaamyada Debian:
apt-hel rakib init xinit
Ugu dambeyntiina, qaabeyn aad u horumarsan, amarka socodsiiya sudo raspi-config, si aad u hesho menu leh xulashooyinka qaabeynta kala duwan. Macluumaad kale oo muhiim ah ayaa ah inay lagama maarmaan tahay in lagu rakibo Putty iyo VNC Viewer kombiyuutarka aad u isticmaali doonto inaad ku xakameyso Raspberry-kaaga meel fog.
Marka loo barbardhigo moodooyinka Pi 2, Raspberry Pi 3 waa 50% dhakhso badan. Iyada oo leh afar geesood ah 1,2 GHz iyo 64-bit, ARMv8 802.11n Wireless LAN CPU, Bluetooth 4.1 iyo Bluetooth Low Energy (BLE), waa nooc horeyba ugu baahnaa nidaam aad ufiican, hufan oo dawaarle ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Qaybinta » RaspEX: Jaangooyada Raspberry Pi 3 oo leh Iswaafajin Dib udhac ah
Ignatius Rubin dijo
Waad salaaman tihiin waadna ku mahadsan tihiin macluumaad badan,
Hal su'aal, sidee baan ugu hagaajiyaa isku xirka internetka lan, iyo tan labaad, sidee baan u rakibaa android, waan iibsaday barnaamijka laakin ma rakibi karo, in kasta oo waxa igu adkaaday ay yihiin arinta internetka, ka hor,
Jawaab Ignacio Rubin
Xirmooyinka ku jira DEBIAN - Qaybta II (Maareynta Wajahadda Shabakadda)